HMS Nelson kwiMfazwe Yehlabathi II
I-HMS Nelson ingayifumana imvelaphi yayo kwimini emva kweMfazwe Yehlabathi I. Ukulandela imbambano i-Royal Navy yaqala ukudibanisa iiklasi zaso zemfazwe kunye nezifundo ezifunyenwe ngexesha lemfazwe engqondweni. Emva kokuthatha ilahleko phakathi kwamagunya akhe okulwa neJutland , kwenziwa imizamo yokugxininisa ukutsha kwamandla kunye nezixhobo zokuphucula ngokukhawuleza. Ukuqhubela phambili, abacwangcisi benza i-G3 entsha ye-battlecruiser design eza kuphakama i-16 "izibhamu kwaye ibe nejubane eliphezulu lamaqhina angama-32.
Ezi ziza kuhlanganiswa ngamanqanawa e-N3 aphethe iibhola ezili-18 kwaye anakho ama-knots angama-23. zombini idizayini zenzelwe ukuncintisana neenqwelo zemfazwe ezicwangciswe yi-United States neJapan. 1921 waza wavelisa isivumelwano seWashington Naval .
Uhlanga: Great Britain
Umkhombe: Armstrong-Whitworth, eNewcastle
Ukukhutshwa phantsi: Disemba 28, 1922
Kwaqaliswa: Septemba 3, 1925
Ukumiselwa: Agasti 15, 1927
Isohlwayo: Ukutyhulwa, ngoMatshi 1949
Ukufuduka: ama- 34,490 toni
Ubude: 710 ft.
Uyilo: 33 ft.
Ukukhawuleza: 23.5 amaqhina
Ukuzaliswa: amadoda angama-1,361
9 × BL-16. Mk Iibhamu (3 × 3)
12 × BL 6 kwi. Mk XXII izibhamu (6 × 2)
6 × i-QF 4.7 kwi-anti-aircraft gun (6 × 1)
48 × QF 2-pdr AA (6 e-octuple mounts)
16 × 40 mm ukulwa neenqwelo-moya (4 × 4)
61 × 20 mm ukulwa neenqwelo zomlilo
Isivumelwano sokuqala sokungabikho kwezixhobo zanamhlanje, umnqophiso ulinganiselwe ubungakanani beefayile ngokuseka umlinganiselo we-tonnage phakathi kwe-Great Britain, i-United States, eJapan, e-France nase-Itali.
Ukongezelela, iyanqanda iinqwelo zokulwa eziza ku-35 000 iitoni kunye ne-16 "izibhamu." Ngenxa yokufuna ukukhusela ubukhosi obude, iRoyal Navy yathetha ngempumelelo umda we-tonnage ukuba ungabandakanyi isisindo esivela kumbane kunye nokutya kwamanzi. Iimfazwe ezine ze-N3 zagqithisa ukukhawulelana kwemibandela kunye neziyilo zacinywa.
Ixesha elifanayo lifikela i- Lexington-i- classic warcruisers ne- South Dakota- iinqwelo zokulwa.
Kwimizamo yokudala ibhola elitsha elalijongene nemigqaliselo efunekayo, abacebisi baseBritani bahlala kwisakhiwo esiqingqiweyo esibeka zonke izibhamu eziphambili ze-superstructure. Ukuphakama iintambo ezintathu ezintathu, i-design entsha yabona i-A kunye ne-X zengxoworha ephakamileyo kwinqanawa eliphezulu, ngelixa i-B ibhokhwe yayisesikhundleni esiphakamileyo (esiphakamileyo) phakathi kwabo. Le ndlela incedise ekunciphiseni ukufuduka njengoko kunqamle indawo yeso nqanawa efuna iinqwelo ezinkulu. Ngoxa i-innovative approach, i-A kunye ne-B zivame ukuwonakalisa izixhobo kwimozulu yezulu xa kuqhuma phambili kwaye i-X turret ihlala ichitha iifestile kwibhulorho xa ibetha kakhulu. Ukudweba kwindlela yokuyila i-G3, uhlobo olutsha lwesibini luye lwahlanganiswa.
Ngokungafani naso sonke isilwanyana saseBrithani ukususela kwi- HMS Dreadnought (1906), iklasi elitsha yayingenalo abaqhubi abane kwaye kunokuba liqeshe ezimbini kuphela. Ezi zixhaswe ngamabhoyili anesibhozo e-Yarrow ezenza malunga ne-45,000 ye-horse shaft. Ukusetyenziswa kwezimbizi ezimbini kunye nesityalo esincinci senziwa ngenzame yokwenza isisindo. Ngenxa yoko, kukho iinkxalabo ukuba iklasi elitsha liza kuzisa isantya.
Ukuhlawulela, i-Admiralty isebenzisa ifom ye-hidynamicity ephezulu kakhulu ukwenzela ukwandisa iinqanawa ezikhawulezayo.
Ngomnye umzamo wokunciphisa ukufuduka, "indlela yonke okanye akukho" indlela yokukhusela isetyenzisiwe kunye neendawo ezikhuselekileyo okanye zingakhuselekanga nhlobo. Le ndlela yayisetyenziswe ngaphambili kwiiklasi ezintlanu ezibandakanya iinqwelo zokulwa eziqhelekileyo ze-US Navy (i- Nevada -, ePennsylvania- , e- Mee Mexico,, eTennessee , nase- Colorado -classes). , i-belt belt belt ukunyusa ububanzi bomnxeba webhanti kwi-projectile ebethayo. Kwi-aft, i-superstructure eyinquma ye-ship yayiyi-triangular kwisicwangciso kwaye isakhiwe ngokubanzi ngezinto ezilula.
Ukwakhiwa kunye neKhathalelo yasekuqaleni
Inqanawa ehamba phambili yale nqanaba elitsha, i-HMS Nelson , yafakwa e-Armstrong-Whitworth eNewcastle ngoDisemba 28, 1922.
Ebizwa ngokuba yiqhawe likaTrafalgar , i- Vice Admiral iNkosi uHoratio Nelson , iinqanawa zaqaliswa ngoSeptemba 3, 1925. Le nqanawa yagqitywa kwiminyaka emibini ezayo kwaye yajoyina inqwelo-moya ngo-Agasti 15, 1927. Rodney ngoNovemba. Yenza i-flagship yeFleet Fleet, uNelson wayesebenza kakhulu emanzini aseBrithani. Ngomnyaka we-1931, abasebenzi beenqanawa bathatha inxaxheba kwi-Invergordon Mutiny. Ngomnyaka olandelayo wabona ukuba uphondo lwama-anti-aircraft luphucukisiwe. NgoJanuwari 1934, iinqanawa zahlasela iReefs, ngaphandle kwePortsmouth ngelixa behamba ukuya kwi-West Indies. Njengoko i-1930 idlulile, uNelson waphinde wahlengahlengiswa njengoko iinkqubo zalo zokulawulwa komlilo zaphuculiswa, izixhobo ezongezelelweyo zifakwe, kunye nezinye izibhamu ezinqanyulwayo.
IMfazwe Yehlabathi II iza
Xa iMfazwe Yehlabathi II yaqala ngoSeptemba 1939, uNelson wayeseSpapa Flow nge-Home Fleet. Kamva ngaloo nyanga, uNelson wahlaselwa ngamabhomu angamaJamani ngelixa ehambisa i-HMS Spearfish eyonakele ekubuyeni. Ngenyanga elandelayo, uNelson noRudney bahamba olwandle ukuze bathathe umkhosi weJamani waseGneisenau kodwa abaphumelelanga. Ukulandela ukulahlekelwa kwe-HMS Royal Oak ukuya kwisikebhe sase-Ujamani kwi-Scapa Flow, zombini i- Nelson -class warships yayise-Loch Ewe eScotland. Ngomhla kaDisemba 4, ngelixa bekungena eLoch Ewe, uNelson washaya umbane wamagnetic owabekwa ngu- U-31 . Ekubangela umonakalo omkhulu kunye nokukhukula, ukuqhuma kwanyanzelisa ukuba umkhumbi uthathe ididi ukuze ulungiswe. UNelson wayengatholakali kwinkonzo de ngo-Agasti 1940.
Ngethuba elisegcekeni, uNelson wathola ukuphuculwa kwamanani amaninzi kuquka ukudibaniswa kohlobo lwe-284 radar.
Emva kokuxhasa u-Operation Claymore eNorway ngo-Matshi 2, ngo-1941, umkhumbi waqala ukukhusela iimvoya ngexesha leMfazwe yaseAtlantic . NgoJuni, uNelson wanikezelwa ku-Force H waza waqala ukusebenza esuka eGibraltar. Ukukhonza kwiMeditera, kwaxhaswa ekukhuseleni imivo ye-Allied. NgoSeptemba 27, 1941, uNelson washaywa yi-torpedo yaseNtaliyane ngexesha lokuhlaselwa komoya ukuliphoqa ukuba libuyele eBrithani ukuze lilungiswe. Egqitywe ngo-Meyi 1942, yaphinde yahlangana neHome H njengeentlanzi ezintathu emva kweenyanga. Kule nxaxheba ixhasayo iinzame zokuhlaziya iMalta .
Njengoko amabutho aseMelika aqala ukuqokelela kuloo ndawo, uNelson wanikela ngenkxaso ye- Operation Torch landings ngoNovemba 1942. Ehleli e-Mediterane njengenxalenye ye-Force H, yasiza ekunqandeni izinto zokufikelela kuma-Axis amabutho eMntla Afrika. Ngokuphelela ekuphumeleleni ukulwa eTunisia, uNelson wajoyina ezinye iinqanawa zomlambo ezincedisayo ekuncedeni ukuhlasela kweSicily ngoJulayi 1943. Oku kwalandelwa ngokubonelela ngenkxaso yokuqhuma imipu ye- Allied landings eSalerno , e-Italy ekuqaleni kukaSeptemba. NgoSeptemba 28, uGeneral Dwight D. Eisenhower wadibana ne-Italy Field Field Marshal Pietro Badoglio e- Nelson ngeli xesha iinqanawa zazinye eMalta. Ngeli xesha, iinkokheli zasayina ingcaciso ecacileyo ye-armistice yase-Italy kunye neAllies.
Ekupheleni kwemisebenzi emikhulu yemikhosi eMeditera, uNelson wafumana imiyalelo yokubuyela ekhaya ukuze ahlaziywe. Oku kubonwe ukuphucula okunye ukukhusela kwayo. Ukujoyina le nqanawa, uNelson waqala ukugcinwa kwindawo egcinwe kwi- D-Day landings.
I-Ordered forward, yafika kwi-Gold Beach ngoJuni 11, 1944, yaqala ukubonelela ngenkxaso yempukelo yamaphunta kwimikhosi yaseBrithani. Ukuhlala kwisikhululo seveki, uNelson washaya i-"shells" kwiiJebhi zakwaJamani ngo-Juni 18, i-battleship yahlutha iimbombo ezimbini xa ihamba. kubangela umonakalo omkhulu. Nangona inxalenye phambili yeso nqanawa yafumana izikhukula, uNelson wakwazi ukukhupha kwi-port.
Emva kokuvavanya umonakalo, iRoyal Navy yonyulwa ukuba ithumele uNelson kwiFiladelphia Naval Yard yokulungiswa. Ukujoyina i-concom e-westbound convoy e-UC 27 ngoJuni 23, yafika kwiDelaware Bay ngoJulayi 4. Ukufaka umkhosi omile, umsebenzi waqala ukulungisa umonakalo obangelwa yimigodi. Ngethuba apho, iRoyal Navy yazimisela ukuba isabelo esilandelayo sikaNelson siya kuba seLwandle lwaseNdiya. Ngenxa yoko, i-refit enziwe ngokubanzi eyenziwe yintoni ebonise inkqubo yokuphucula umoya, iinkqubo ezintsha ze-radar zifakwe, kunye nezinye izixhobo zokulwa neenqwelo-moya eziphakanyisiweyo. Ukushiya iPhiladelphia ngoJanuwari 1945, uNelson wabuyela eBrithani ekulungiseleleni ukuthunyelwa kwiMpuma Ekude.
Ukujoyina iBritish Fleet yaseBrithani e-Trincomalee, eCeylon, uNelson waba ngu-Vice Admiral WTC Walker's Force 63. Kwiinyanga ezintathu ezizayo, ibutho lokulwa elisebenza kwi-Malayan Peninsula. Ngeli xesha, uMbutho wama-63 wenza ukuhlaselwa komoya kunye namabhobholo ebhankini ngokumelene nezikhundla zaseJapan kule ndawo. Ngokuzinikela kweJapan, uNelson wabuyela ngeGeorge Town, ePenang (eMalaysia). Ukufika, u-Admiral u-Uozomi wangena emkhunjini ukuba anike amandla. Ehamba ngaseningizimu, uNelson wangena kwisibonda saseSingapore ngoSeptemba 10 waba yinqaba yokuqala yaseBrithani ukufika apho ukususela kwesi siqithi ngo-1942 .
Ukubuyela eBrithani ngoNovemba, uNelson wayekhonza njenge-flagship ye-Home Fleet ade aqhutywe kwinxaxheba yokuqeqesha ngoJulayi olandelayo. Ebekwe kwindawo egcinwe kuyo ngoSeptemba 1947, i-battlehip kamva yakhonza njengombono wokuqhuma ibhomu kwi-Firth of Forth. Ngo-Matshi 1948, uNelson wathengiswa ngokutshiza. Ukufika kwi-Inverkeithing kunyaka olandelayo, inkqubo yokuqhaqha yaqala
ISicwangciso soPhulo oluPhuphayo: Lungiselela iKholeji yabantwana ngokugula kunye nokulimala
Uluhlu lwemiSebenzi kaHenrik Ibsen